Indlu eyinqaba ehlathini KARORI
Chizu, Yazu-gun, Tottori, i-Japan
Iqhugwane ibungazwe ngu-かろり
U-かろり Ungumbungazi ovelele
Njengendlela yokulwa ne-coronavirus entsha, indlu yakudala yasehlathini inejeli yesandla ebulala inzalo efakwe kwikhawunta. Ngaphezu kwalokho, siqashe isakhiwo esingenamuntu kusukela ngesikhathi sokungena ukuze amakhasimende ethu akwazi ukuchitha isikhathi sawo kancane. Njengoba amakhasimende nabasebenzi bengathintani ngqo, ungakujabulela ngokuzethemba ngisho nangenkathi ye-corona.
I-Chizu Fukuwara ikwenza uzizwe unostalgic njengedolobha langakini. Ungasebenzisa indlu yesintu eneminyaka engu-120 emi lapho ukuze isetshenziswe ngasese nomndeni wakho nabangane abaseduze. Sicela ujabulele isikhathi sokuphumula se-Chizu Fukuwara kanye nesikhathi esikhethekile esichithwa emvelweni enhle. Silungise indawo yomlilo egcekeni elingemuva. Siphinde siqashe amasethi e-BBQ. Ungajabulela ukuhlala kwakho nomndeni wakho nabangane.
I-Chizu Fukuhara ikwenza uzizwe unesizungu sengathi ukuphi.Ungaqasha indlu yangasese eneminyaka engu-120 ubudala nomndeni wakho nabangane abaseduze. Sicela ujabulele isikhathi.
"I-Korori, indlu yesintu endala ehlathini" inezitofu ezintathu ezibaswa ngezinkuni zezinhlobo ezihlukahlukene kanye nokugeza kwe-Goemon. Kuzoba yindlu yezihambi lapho ongajabulela khona ukuhlala "nezinkuni zokubasa".
Kunezinhlobo ezi-3 zezitofu zezinkuni kanye nokugeza kwe-Goemon "Indlu encane ehlathini KARORI".
Kuzoba yindlu yezihambi lapho ungajabulela khona ukuhlala “ne-mochi”.
Inikezwa njengenketho. Sicela uxhumane nomsingathi kusasele iviki elilodwa ukuze kube lula ukulungiselela. Izidlo zizoxazululwa endaweni.
Inikezwa njengenketho. Sicela uxhumane nomsingathi kusasele iviki elilodwa ukuze kube lula ukulungiselela. Ukudla kuzoxazululwa endaweni.
[Ukushiswa kwesitofu sezinkuni kanye nokugeza kwe-Goemon]
Ama-ignition agents nama-gas burners ayatholakala. Siphinde sinikele ngezinkuni eziqinile ezitshalwe endaweni ezomiswe isikhathi eside ehlobo. Sicela ukhululeke ukuyisebenzisa. Usekelo luyatholakala kulabo abakhathazekile ngokuvutha (inkokhelo eyengeziwe). Sicela uxhumane nomsingathi okungenani iviki elilodwa kusengaphambili.
[Ukushiswa kwesitofu segesi kanye nokugeza kwe-Goemon]
Siphinde anikele wendawo oluqinile izinkuni esiye omisiwe isikhathi esingaphezu ehlobo. Yisebenzise ngokukhululekile. Uma ukhathazekile mayelana ukuthungela, sisekelwa. (Icala engaphezulu). Sicela uxhumane umninikhaya okungenani 1 iviki kusengaphambili.
Kukhona izindawo zokuhamba eduze, njengomgwaqo owasetshenziswa yinkosi yangaphambili ye-Tottori ukuze kushintshwe abantu abakhona kanye nemvelo emangalisayo eyakhiwe umthombo woMfula iChiyo. Ngaphezu kwalokho, i-Tottori Prefecture yaziwa nangokuthi "i-Hoshitori Prefecture", futhi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu e-Japan lapho ungabona khona izinkanyezi. Izinkanyezi ezingenakubalwa ezibenyezela esibhakabhakeni ebusuku nazo zingenye yezinto ezivelele ze-"Korori, indlu endala yesintu ehlathini".
Kukhona izindawo zokuhamba eduze, njengomgwaqo umnikazi we-Tottori wangaphambili ayewuthamela kanye nemvelo emangalisayo eyakha umthombo womfula iChiyogawa. Ngaphezu kwalokho, iSifunda saseTottori sibizwa ngokuthi “Isifunda saseHoshitori” futhi indawo ongabona kuyo. ezinye zezinkanyezi ezinhle kakhulu e-Japan Izinkanyezi ezingenakubalwa ezicwebezela esibhakabhakeni ebusuku zingenye yezinto ezinhle kakhulu ze-"Quaint house in the woods KARORI".
Samukela ngocingo noma nge-imeyili kusukela ngo-9:00 kuya ku-18:00.
Uかろり Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: I-Hotels and Inns Business Act | 鳥取県鳥取市長 | 第2019－5号